Abasekeli beBosso Babonga uMgadafi Ngokumnikeza Umvuzo
Abasekeli beqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders abazibiza ngokuthi yi Bosso Bulletin, sebekhethe umgadli uPrince Dube njengomdlali odlale kuhle okwedlula abanye bonke lonyaka.
Ekhuluma ngesikhathi besipha uPrince Dube umvuzo wakhe ilunga leqembu le Bosso Bulletin uKing Mojalifa Ndlovu uthe kungumlandu wabo njengabalandeli beqembu le Highlanders ukukhuthaza abadlali ukuba badlale ngokuzimisela okukhulu bencedisana lenkokheli yeqembu.
“Njengeqembu siyalandela imidlalo siphinde sikhangele ukuba abadlali baziphatha njani nxa bengekho enkundleni sibe sesivota sidinga ukuba nguphi umdlali odlale okwedlula abanye njalo lonyaka sikhethe uMgadafi (Prince Dube),” kutsho uNdlovu
Abanye abadlali asebeke bathola imivuzo ivela kuqembu le Bosso Bulletin eminyakeni eyedluleyo ngabagoqela uRahman Kutsanzira, osedlalela iqembu le FC Platinum, uPeter Muduhwa kanye lo Ariel Sibanda.
Amalunga awe Bosso Bulletin aphe umfoka Dube inkezo kanye lenkulungwane zama Rand njengesibongo esokuba udlale kuhle lonyaka njalo imivuzo leyi iza ngemva kokuba umfoka Dube ekhethwe ukuba ngomunye wabadlali abalitshumi lanye abakhethwe kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka kusigaba se Castle Lager Premier Soccer League.
UDube ube ngowesithathu ngemva kuka Ralph Kawondera oweqembu le Triangle United kanye lo Joel Ngodzo owe CAPS United, onguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale okwedlula abanye lonyaka kusigaba se PSL.
Kusenjalo iqembu le Chicken Inn libe lomkhosi owokubonga abadlali balo abadlale kuhle lonyaka ngoLwesine ntambama njalo abadlali abathole imivuzo ngabalandelayo.
UGeorge Majika ukhethwe ukuba ngumdlali ohlohle igoli elihle okwedlula amanye wonke ikanti uClive Augusto nguye othole isicoco esokuba ngumgadli ohlohle kanengi ngemva kokuba watshiya ehlohle amagoli alitshumi lane engakayidlalela iqembu le Maritzburg United kwele South Africa.
Umgadli uAubrey Chirinda kuthiwe nguye umdlali ogijimisa igazi, uPride Zendera nguye umgadli olembeko, uClement Matawu uthole umvuzo ovela kumgcinisihlalo weqembu, uNyasha Gurende nguye umdlali osakhulayo otshengisa ukuba lekusasa elihle, uXolani Ndlovu nguye umdlali okhethwe ngabanye abadlali ukuba udlale kuhle lonyaka waphinda njalo wakhethwa zinkokheli zeqembu ndawonye lo Tichaona Chipunza ukuba yibo abadlali abadlale kuhle lonyaka.
Kolunye udaba olufanayo iqembu le Bulawayo Chiefs lalo liqhube umkhosi wokubonga abadlali ensukwini ezisanda kwedlula lapho umdlali wesiswini senkundla uLucky Ndlela abuthe khona imivuzo.
UNdlela ukhethwe ngabanye bakhe ukuba nguye umdlali odlale okwedlula abanye kwathi lenkokheli yeqembu layo yamethesa inkatha efanayo ikanti uphinde njalo wakhethwa ukuba nguye umdlali wenkabeni yenkundla odlale okwedlula abanye.
Abanye abadlali abathole izicoco ngabagoqela uArthur Musiyiwa, uShadreck Nyahwa, uMbonisi Ncube, uFarau Matare, uMalvin Mkolo, unozinti uDavid Bizabani kanye lo Brandon Mpofu.